सरकारले नक्कली सेयर कारोवार गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने भएकाे छ - prawaskhabar
२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नक्कली सेयर कारोवार गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नक्कली सेयर कारोबारमा संलग्नलाई १० लाखसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको हो ।
बोर्डले सोमबार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सेयर कारोबार बढोत्तरी गराउन नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने जानकारी पनि गराएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले नक्कली सेयर कारोबार गर्नेहरुमाथि कडा कारवाही हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको बताए ।
बोर्डले धितोपत्र बजारमा व्यापक जनसहभागिता बढाउन ‘एक नेपाली, एक डिम्याट खाता’ अभियान संचालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ । त्यसैगरी सबै स्थानीय तहमा पूँजी बजारमा लगानी बढाउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रम पनि तय गरेको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले धितो बजारलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक संरचना बनाउने योजना पनि तय गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको शीरमा श्रीपेच !
एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा दाङको सिसहनियामा